May 20, 2017 2:44 b 0
Ciyaar Xiiso badan ayaa waxa ay garoonka Bandar Qaasim Staadiyam ku dhexmartay kooxaha Fc Bari iyo SBC. Ciyaartan ayaa ahayd mid go’aminaysay cida ku gulaysanayana horyaalka Puntland. Magaalooyinka Garoowe iyo Bosaaso ayaa laga sugayay natiijada, oo kooxda Garoowe City ay rabtay in laga badiyo kooxda FC Bari. Bal se taasi ma dhicin oo kooxda SBC ayaa looga badiyay 5:1, waxaana sidaas horyaalka Puntland ku noqday kooxda FC Bari.
Dhanka kale, ninka iska leh saamiga ugu badan ee kooxda Arsenal ayaa sheegay inuu qaar hantidiisa kooxda kala bixi doona, taas oo abuurtay shaki aan horay u jirin.